Ya mere, ndị Xiaomi Mi Band 3 ga-abụ? | Akụkọ akụrụngwa
Ya mere, ndị Xiaomi Mi Band 3 ga-abụ?
Ogologo oge gafere kemgbe mmalite nke Xiami Mi Band 2, ụlọ ọrụ China kwere ka ogologo oge gafee n'etiti mwepụta nke ụdị a dị ugbu a na ihe kwesiri ịbata n'ọnwa a, e chere na onwa Mee 17 enwere ihe omume akwadoro ...
na Wearables Ha bụ ihe dị mkpa taa maka ọtụtụ n'ime anyị ma na nke a, ị nwere mgbaaka mgbapụta n'ụdị nke Xiaomi a. N'okwu a, a na-agbakwunye ogo ngwaahịa na ọnụego belatara, ihe ọ bụghị ihe niile nwere ike ịnya isi, ugbu a mgbe tweet siri ike ha na-aga n'ihu asịrị ọhụrụ nke ọhụrụ Xiaomi Mi Band 3.
Xiaomi nwere na katalọgụ ya ọtụtụ ngwaahịa dị mma ma na nke a, anyị nwere ike ịhụ ka Mi Band na Mi Band 2 na-aga nke ọma ka bụ ezigbo nhọrọ maka ụdị ngwaahịa a n'ihi ezigbo uru maka ego. Ugbu a, mgbaaka ọhụrụ a na-apụta n'etiti asịrị, ndị ọrụ na-eche ịzụrụ a wearable Ha kwesịrị ichere ntakịrị ma hụ ihe Xiaomi na-egosi anyị.
Nke a bụ tweet nke ụlọ ọrụ ahụ mepere mmachibido iwu na asịrị ma tinye na tebụl ihe nwere ike ịbụ ihe ọhụrụ Xiaomi Mi Band 3:
Nwere ike ịma ihe ọ bụ? pic.twitter.com/EstUJDUIff
Asịrị banyere ndị otu Mi 3
Site na ihe anyị nwere ike ịkọwa, anyị ga-eche ihu mgbaaka mgbapụta na ihuenyo mmetụ dị ka ụdị nke ugbu a, yana otu panel nke 1,5 sentimita asatọ OLED ma nwee NFC. Asịrị na-atụ aro na ọ ga-enwe asambodo IP67 dị ka nke ugbu a.
Ihe kachasị mkpa n'ụdị ngwaahịa Xiaomi bụ ọnụ ala ya na nke a ọnụahịa a na-anụ asịrị na-ekwu maka ya obere ihe na-erughị 30 euro iji gbanwee. Anyị ga-ahụ na eziokwu dị na ihe a niile ma anyị ga-echere na Mee 17 na-esote, nke bụ mgbe ụlọ ọrụ ga-egosi anyị ihe ọhụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Ya mere, ndị Xiaomi Mi Band 3 ga-abụ?
VR Drone Autoflight Nyocha
Cambridge Analytica na-emechi kpamkpam